IZINDLELA EZINHLE ZOFAKA IZINWELE "ZIMALIMELE MAHHALA" – SL Raw Virgin Hair LLC.
IZINDLELA EZINHLE ZOFAKA IZINWELE "ZIMALIMELE MAHHALA"
Ubani ongathandi ukudlala ngezinwele zakhe ukuze abukeke emuhle? Izinwele zakho ezicwebezelayo nezigqamile zakha ukuzethemba kwakho nokuzethemba kwakho. Kungakho uhlala ufuna lokho kugunda kwezinwele okukodwa kwaphezulu noma umbala wezinwele. Kodwa, ukuhlola odayi bezinwele abahlukene kanye nezinqubo zesitayela kudume ngokulimaza kakhulu izinwele zakho. Manje umbuzo odida ingqondo uthi; uyafuna ukuthi izilinganiso zombala wezinwele zakho zikhulume namanye amaqiniso ajulile mayelana nokuthi ungubani noma uhambe ohambweni olungenakubekezelelwa lokuphatha izinwele eziphukayo nezilimele? Hhayi-ke akunjalo, yingakho siye phambili futhi saqoqa amaqhinga amahle okufaka imibala ezinwele ka-2020 ongase ufune ukuwazama noma ukuwazama.
Isizini entsha iza namathrendi amasha okukhombisa ubuntu bakho ngokufaka imibala nokugqamisa izinwele zakho. Uma ufuna amathiphu okuzinakekela, ngena kule inspo yombala wezinwele.
Funa ukunakekelwa okuphansi, okulula ukubukeka, bese ukungeza ezimpandeni zakho kuyindlela okufanele uhambe ngayo. Akulimazi nje kuphela kodwa kukunikeza lokho kubukeka okunenhlese kodwa futhi kulula ukulawuleka. Sebenzisa umculi uBillie Eilish njengesibonelo - waziwa ngesiginesha yakhe yezimpande eziluhlaza ezi-lime namaphethelo amnyama. Uma ufinyelela lokhu kubukeka isikhathi sokucubungula asisiside nhlobo; ngoba izinwele eziseduze nekhanda lakho zisebenza ngokushesha okukhulu. Uma usuphuzi ngokuphaphathekile ungangena ngombala wamahhala we-ammonia (Manic Panic) ukuze ufake umbala ezimpandeni. Hlanza ngamanzi apholile, isimo futhi ulungisa indlela yakho yokuphuma ngomnyango.
Uma kungesona isivinini obuhamba ngaso leso, ungafuna ukufunda nawe.
Ungaphinda uhambe ngendlela ejabulisayo nge-mocha ensundu enhle. Kodwa linda, awubheke ukushintsha izinwele zakho zangempela ngamakhemikhali? Zithengele kalula rizandiso zezinwele zabantu ezingakaze zibonwe muntu futhi uthenge unjiniyela wevolumu angama-20 onempusha ye-hair bleach ukuze uphakamise kancane izandiso zakho zezinwele zisuka embala wazo wangempela, uma usuphakanyiswe kancane hashaza bese ufaka izinwele umbala - ungaxuba Wella 4N/411 - Lokhu kubukeka okuthambile nokucashile okugqugquzelwe ukukhululeka kwakho futhi akulimazi njengoba kungadingi noma yimuphi umsebenzi wokudaya owedlulele.
Kodwa kwanele ngokubukeka kwentombazane eduze nomnyango. Thuthukisa umdlalo wakho wezinwele ngokuthile okunesibindi nokucasulayo. Inhlolovo yakamuva ibonisa ukuthi abantu babhukha ama-aphoyintimenti e-salon ukuze bathole lezo dos zezinwele eziphefumulelwe ze-unicorn. Nakuba imibala efana ne-lilac, ebomvana, ne-violet isebenza kangcono ngezinwele ezi-blonde ngokwemvelo kodwa inhliziyo ifuna lokho okufunwa inhliziyo. Ngokuthola kalula ezinyeizinqwaba Zezinwele Ezihlanzekile Ezihlanzekile uzobe usendleleni eya ezinweleni zephupho ngokushesha. Imikhiqizo efana ne-Mofajang noma i-Sevích iyi-wax yombala wezinwele efunwa kakhulu. Awubheki umuzwa osindayo we-wax, lapho-ke ungase uthande lena - imikhiqizo eyintandokazi yombala ongenakonakala umbala wokulungisa izinwele ngo-Overtone. Ifomula yabo yesimo esijulile isebenza kangcono kudayi wezinwele wesikhashana.
Akugcini lapho, igeyimu ye-balayage isahamba kahle kulo nyaka. Le ndlela yokwenza izinwele idinga ngempela ukuthi umbala upendwe ngemivimbo emincane noma ewugqinsi ye-bleach yezinwele emaphethelweni ezinwele zakho noma izandiso zezinwele. Kunezinketho eziningi zombala laphaya ongazisebenzisa ngale nqubo. Le nqubo eguquguqukayo igcwele intukuthelo, nakulo nyaka.
Yiba nesibindi futhi uzame uphele. Vumela izinwele zakho zizikhulumele futhi uzame kude namadayi wesikhashana angeke adlulele izinwele zakho ngokuhle. Ungavimbela ukudaya izingidi zakho kuma-elixir kadayi anamandla ngokusebenzisa inkomba yezinwele zamahhala esikunikeze yona - odayi besifutho, ama-conditioner ombala, kanye ne-wax yezinwele ezinombala wesikhashana. Vumela ubumnandi buqale ngezinketho ezithambile, ezingenabo ubuthi. Le mikhiqizo inemibala egqamile futhi ikunikeza ukubukeka okusha okusheshayo okuhamba ngokuwashwa kokuqala.Ngakho-ke, lahla ukubhuka kwakho futhi ukhuphule umdlalo wakho wezinwele